प्रधानमन्त्रीज्यू, लैनचौरसँग किन थुर्थुर काँपेको ? | YesKhabar
२०७७ साल असार २९ गते, सोमबार
आज २०७७ असार २८ गते आइतबारको राशिफल
आज २०७७ असार २९ गते सोमबारको राशिफल
धर्मशास्त्र : यी हुन् एकाबिहानै ‘ॐ’ उच्चारण गर्दा हुने फाइदा
प्रधानमन्त्रीज्यू, लैनचौरसँग किन थुर्थुर काँपेको ?
२०७७ साल असार १५ गते, सोमबार ०४:२२ PM
Total Share : 129 Total Views : 909
काठमाडौं - आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्वोधन सामान्य थिएन । एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन ‘विदेशी दूताबासले सक्रियता देखाएको’ विषय सामान्य होइन, जघन्य अपराध हो । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध कोही पनि स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई सैह्य हुँदैन ।
नेपाली जनताले बहुमत दिएर सरकार चलाउन पठाएका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन लैनचोरस्थित भारतीय दूतावास सक्रिय भएकै हो भने आफूलाई आँटिलो राष्ट्रवादी दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण मात्रै ठोकेर दायित्व पूरा हुँदैन । सरकार ढाल्न सक्रिय हुने राजदूतलाई तुरुन्त सिंहदरबारमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । स्पष्टीकरण सोधेर मात्र पुग्दैन । तल्कालै, २४ घण्टाभित्र नेपाल छाड्न आदेश दिनुपर्छ ।
आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी र सहासी राजनेता दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली भारतीय राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्न किन डराइरहेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन ।
दूतावासले सरकार ढाल्ने सक्रियता देखाएको जान्दाजान्दै ओली सरकारले भारतीय राजदूतमाथि कुनै कूटनीतिक ‘एक्सन’ नलिने हो भने नेपालको आधुनिक इतिहासमा यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुनेछ ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले के भनेका थिए ? एकपटक त्यो अभिव्यक्ति स्मरण गरौं –
१. तपाई हामी सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ । तपाईहरुले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ, हप्ता/पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ भनिँदैछ । भारतका मिडियाहरु सुन्नुभएको होला । भारतका वौद्धिक बहसहरु सुन्नुभएको होला, कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ ।….
२. हामीले… हाम्रो जमीन फिर्ता ल्याउन खोज्यौं, अरुको जमीनमा दाबी गरेको होइन । अरुको जमीन अतिक्रमण, हस्तक्षेप गरेको होइन । त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौं । तर, यहाँँ नेपालकै नेता लाग्या रछन् । बहस चल्या र छ । अहिले होइन, केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन ।….
३. पहिले यहाँहरुलाई सम्झना होस्, चीनतिर पनि ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढल्याथ्यो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन । अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो, त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब… भित्र–भित्रको कुरा हो । बाहिर–बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ, दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरु सुन्नोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ–कहाँ केके भैराख्या छ । यहाँका होटलहरुमा भइराखेका गतिविधिहरु, त्यसले पनि बताइराखेको छ । एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइराखेको छ ।
४. मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन । तर, यतिबेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्नेछैन । किनभने, भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ ।
व्याख्या : प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टसँग अथ्र्याएका छन्, यहाँ (काठमाडौं ) का होटलहरुमा भइराखेका गतिविधिहरु र एम्बेसीको सक्रियताले पनि बताइराखेको छ कि भित्रभित्रै केपी ओलीलाई हटाउने गतिविधि भइराखेको छ ।
ओलीले स्पष्टरुपमा भनेका छन्, यसमा भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ । र, यहाँ (नेपाल) का नेताहरु पनि लागेका छन् ।
भारतीय राजदूताबास यसरी सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको हो र नेपालकै नेताहरुले पनि होटलमा त्यस्ता गतिविधि गरिरहेका हुन् भने भारतीय दूतावासमाथि सरकारले एक्सन लिनुपर्छ कि पर्दैन ? अनि यस्तोबेलामा पनि भारतीय दूताबाससँग साँठगाँठ गर्ने नेपालका ती नेताहरुलाई नांगेझार बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि यो काम प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न सकेनन् भने उनलाई इतिहासले कायर, निकम्मा एवं ‘बातबहादुर’का रुपमा लिपिवद्ध गर्ने निश्चित छ ।
नेपालले भर्खरै लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेतलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले नक्सा तयार पारिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई तत्कालै नगरौं भन्दै रोकेरै राखेका थिए ।
पछि नेकपा सचिवालयको बैठकमा पनि ओली ‘भूमि फिर्ता ल्याउनु मुख्य कुरा हो’ भन्दै तत्काल नक्सा प्रकाशित गर्न अन्कनाएको नेकपा सचिवालयकै नेताहरु बताउँछन् । त्यहाँ विशेष गरी वामदेव गौतमले तत्कालै नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर ‘प्रेसर’ गरेपछि बल्ल प्रधानमन्त्री ओली तयार भएको नेताहरु बताउँछन् ।
जे होस्, नेकपा सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्‍यो र त्यसलाई सबैले स्वागत÷समर्थन गरे । जब ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानमा नक्सा समेट्नका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्यायो, त्यसमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति जुट्यो र सर्वसम्मतरुपमा संविधान संशोधन भयो ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र भारतले हडपेको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्दा त्यसको विरोध होकी पनि नेपाली जनताले गर्नेवाला छैनन् । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैको साथ र सहयोग रहने छ, रहनैपर्छ ।
अनि, यस्तो अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भइरहेका बेला अकस्मात् प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन भारतीय दूताबास सक्रिय भएको हो भने केपी ओलीले रुञ्चे भाषण गरेर बस्न सुहाउँछ ? के यही हो हामी नेपालीहरुको राष्ट्रिय स्वाभिमान ? के यही हो हामीले खोजेको राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाइँको सारथी ?
प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिकरुपमै भनिसकेपछि अब ‘भारतीय दूताबासको चलखेल’ बारे तत्कालै सत्तारुढ नेकपाको बैठकमा छलफल हुनुपर्‍यो । क्याबिनेट बैठक बोलाउनुपर्‍यो । सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्‍यो । र, सरकारले तुरुन्तै लैनचौरमाथि कूटनीतिक एक्सन लिनुपर्‍यो । त्यसरी एक्सन लिएरको जानकारी नेपाली जनतालाई गराउनुपर्‍यो ।
आइतबारको सम्वोधनमा प्रधानमन्त्रीको भनाइको सार यो पनि थियो कि केपी ओलीलाई हटाउन नेपालकै नेताहरु पनि एम्बेसीसँग मिलेर भित्रभित्रै लागेको होटलहरुको गतिविधिले देखाएको छ ।
स्मरण रहोस् सरिता गिरीबाहेक सबै नेताहरुले नक्सा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर सरकारलाई साथ दिएका थिए । आखिर, को निस्किएछ लैनचौरसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोज्ने राष्ट्रघाती नेता ? प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो राष्ट्रघातीको नाम लुकाउन मिल्छ ? त्यस्तालाई राष्ट्रघात गरेको अभियोगमा कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? आफ्नै पार्टीभित्रै छन् भने तत्कालै पार्टीबाट हटाउनुपर्छ कि पर्दैन ?
स्मरण रहोस्, प्रतिनिधिसभामा नेकपासँग स्पष्ट बहुमत छ । नेकपाका नेताबाहेक कांग्रेस, राप्रपा, जसपा वा अरु कुनै पनि दलले होटलमा गतिविधि गर्दैमा वा लैनचौरसँग साँठगाँठ गर्दैमा ओली सरकार ढल्नेवाला छैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमाथि कतैबाट खतरा छ भने नेकपाबाटै छ । कांग्रेस वा अरु कुनै दलबाट छैन । अझ नक्साको मामिलामा त प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षीले पनि साथ दिएको अवस्था छ ।
यो परिस्थितिमा दिल्ली र काठमाडौंका केही अमूक नेताहरु मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गतिविधि सुरु भयो भन्नुको मतलब ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र नेताहरुलाई भन्न खोजेको देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने राष्ट्रियताबारे सत्तारुढ नेकपाको अडानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने छ ।
के प्रधानमन्त्रीले आवेगमा आएर निराधार अभिव्यक्ति दिएका हुन् त ? उनले यस्सो भारतीय कार्ड खेलौं न त भनेर टुच्च दिएका मात्रै हुन् त ? यस्तो अनुमान लगाउनु भनेको प्रधानमन्त्री पदकै गरिमामाथि हिलो छ्यप्नु हो । देशको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमा बोलेको विषयलाई ‘पानीमा अपान वायु छाडेजस्तो’ ठान्न मिल्दैन । यो इतिहासको रेकर्डमा रहने गम्भीर विषय हो ।
फेरि पनि प्रश्न प्रधानमन्त्रीतिरै तेर्सिएको छ ।
सरकार ढाल्न दूताबासले सक्रियता देखाएकै हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू, लैनचौरसँग किन थुर्थुर काँपेको ? भारतीय राजदूतलाई २४ घण्टाभित्र देश छाडने आदेश दिन किन नसकेको ?
सहसचिव स्तरको राजदूतमाथि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्न भने तपाईले कसरी भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउने विश्वास नेपाली जनतालाई दिलाउनुहुन्छ ? अनि, कसरी भारतसँग वार्ता गरेर कूटनीतिक समाधान खोज्नुहुन्छ ?
आम जनताले साथ दिँदादिँदै पनि लैनचौरसँग किन थुर्थुर काँपेको प्रधानमन्त्रीज्यू ?अरुण बराल
सुन्दरका बिजुली बसले भोलिदेखि सेवा थाल्ने, भाडादर पुरानै कायम
भुवनको निवेदनपछि साम्राज्ञीले वकिलमार्फत पठाइन् मौखिक जवाफ !
एकैदिन १,७०५ संक्रमणमुक्त, हालसम्म १०,२९४ ले जिते कोरोना
आज १४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १६ हजार ९४५ पुग्यो
कर्जा माग हुन छाडेपछि बैङ्कमा पैसै—पैसा, अधिक तरलताले पार्नेछ यस्तो असर
प्रदेश ५ का जिल्लामा खाली हुन थाले क्वारेन्टिन
भारतीय हस्तक्षेपले तराई डुवानमा पर्‍यो : गृहमन्त्री थापा
१४ वर्ष पुरानो सीतापाइलाको त्यो रहस्यमय हत्याकाण्ड :
कर्णाली प्रदेशमा मिसिने कोहलपुर नगरपालिकाको निर्णय
कर्णालीमा थपिए ४७ जना कोरोना संक्रमित, ४१ जना सुर्खेतका
ओझेलमा मोनोरेल सञ्चालन
भानुभक्तमात्र अन्तिम सत्य होइन : श्रवण मुकारुङ
फाट्टफुट्ट गुड्न थाले सार्वजनिक बस
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा काण्डै काण्ड !
कृषि समूहलाई कृषि सामग्री प्रदान